Kedu ihe ị ga-akwado maka ụlọ ọrụ ịgba agba ọhụrụ gị?
Ọtụtụ ndị ahịa chọrọ ịbanye na ụlọ ọrụ na-emepụta agba agba na-achọ ịma ihe nkwadebe kwesịrị ịme tupu mmepụta. Isiokwu na-esonụ ga-ewebata gị n'ụzọ zuru ezu site na akụkụ atọ nke ihe, gburugburu ebe obibi na akụrụngwa. Ọ bụrụ na ị bụ onye novice, akụkọ a nwere ike inyere gị aka. ...
Kedu ihe bụ igwe nzuzo? Nhọrọ ole ka ị nwere maka ịgbakwunye ngwa nbipute na ahịrị mkpọchi ndochi gị?
Kedu ihe bụ Coder? Ọtụtụ ndị ahịa jụrụ ajụjụ a mgbe ha natachara nhota igwe eji amanye akara. Koodu bụ ngwa nbipute kachasị mfe maka akara. Isiokwu a ga-ewebata gị na ọtụtụ mainstream ngwa nbipute na mmepụta akara. 1, Coder/Coding Machine Igwe ngbanwe dị mfe bụ co...
Aseptic oyi ndochi na ọkụ njuputa
Kedu ihe bụ ndochi oyi aseptic? Tụnyere ndochi ọkụ ọdịnala? 1, Nkọwa nke aseptic ndochi Aseptic oyi ndochi na-ezo aka na oyi (okpomọkụ nkịtị) na-ejuputa ngwaahịa ihe ọṅụṅụ n'okpuru ọnọdụ aseptic, nke metụtara usoro ndochi okpomọkụ dị elu na-ejikarị un ...
Kedu ihe na-emetụta ndụ ọrụ igwe?
1. Nke mbụ: Ogo nke igwe. Ndị nrụpụta dị iche iche na ụdị igwe dị iche iche nwere ike iji ngwa eletrọnịkị nke ụdị na nhazi dị iche iche. Igwe ahụ nwere ọtụtụ usoro, na usoro nke ọ bụla na-ejikọta ya na ngwa dị iche iche. Nke dị elu ...
Nleta ndị ahịa Congo maka igwe na-ejuputa.
site admin na 19-12-18
N'oge ngosi mbubata mba ụwa nke abụọ nke China na Nọvemba, ndị nnọchi anya Africa 2019 si Congo, South Africa bịarutere Shanghai. Ndị nwe ya letara ma lelee igwe ha chọrọ, ụlọ ọrụ anyị bụ isi ihe na-ebunye igwe na-ejuputa n'usoro ha. Anyị, Higee Machinery, a n'ichepụta dabeere soplaya ...
Kedu uru na ọghọm dị na karama PLA na PET na ụlọ ọrụ na-ejuputa?
site admin na 19-12-17
Dabere na okwu nke ikewa ahịhịa, ọnụ ahịa na nchekwa gburugburu ebe obibi, karama PLA ọ bụ isi na ụlọ ọrụ ihe ọṅụṅụ? Kemgbe Julaị 1, 2019, Shanghai, China emejuputala nkewa ahịhịa kacha sie ike. Na mbido, o nwere onye n'akụkụ ebe mkpofu ihe nyere aka na g...
kwuru na ofu-ọnọdụ
site admin na 19-12-16
ọ dị iche n'etiti ụdị belt roller na ụdị ọnọdụ ọ bụla maka ịde akara karama okirikiri, ọtụtụ oge, ndị na-azụ ahịa na-enwe mgbagwoju anya site na igwe akara karama okirikiri na ngwaọrụ ekwu okwu na nke edobere. Ha nwere ike ịkpọ karama okirikiri. Kedu ọdịiche dị na ha? Kedu ka anyị ga-esi họrọ igwe kwesịrị ekwesị? Ka anyị banye...
site admin na 19-12-14
2017 China Nka na ụzụ ihe ngosi & ngwa ahịa ihe ngosi
site admin na 19-12-13